अमेरिकामा डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध प्रदर्शन, भने–मडरर गो ब्याक - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
अमेरिकामा डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध प्रदर्शन, भने–मडरर गो ब्याक
आइतवार, भदौ ३१, २०७५ (September 16, 2018, 9:38 am) मा प्रकाशित
अमेरिका भ्रमणमा रहेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । अमेरिकाको टेक्सास पुगेका डा. भट्टराई विरुद्ध त्यहाँ रहेका नेपालीले कालो झण्डा देखाएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
तत्कालीन माओवादीका नेता डा. भट्टराईलाई ‘हत्यारा’ भन्दै प्रदर्शनकारीले फर्किन माग गरेका थिए । उनीहरुले ‘मडरर गो ब्याक’ भन्दै नारा लगाए । उनीहरुले ‘नेपालका छोराछोरीलाई मार्ने, मडरर गो ब्याक’ भन्दै डा. भट्टराईलाई कालो झण्डा देखाएका थिए ।